Pane nzvimbo munyika ino Inonzi "Dubai"
Pane nzvimbo pasi pano inonzi "Dubai"
Dubai - Zvose Zvikuru Uye Zviduku
Yakabudiswa na Dubai City Company at Dai 13, 2019
Pane nzvimbo munyika ino inonzi "Dubai". "DUBAI" nzvimbo yekuzorodza pfungwa dzako dzakadzungaira. Yanga iri nzira yenhau dzebudiriro kune vakawanda vaida kuwana uye kuzadzisa zvinangwa zvavo novotel. United Arab Emirates, Yanga iri nyika yakasiyana kune vafambi vakanaka vanopoterera kutenderera. Kazhinji kutaura, ndiani mushure kushanyira nzvimbo iyi inoshamisa kusunungura ndangariro dzemiviri yavo nemweya. Zvave zvichishamisa makore 15 kwandiri kuti ndive chikamu chenyika ino. Zuva rega rega uye rimwe nerimwe rine mashiripiti mune iyi inoshamisa. Imwe neimwe nguva Dubai inozivisa chimwe chinhu chakanaka icho inogadzira nguva dzinoenderana dzevashanyi nevashanyi.
Testimony yangu yepamoyo paDubai. Ndakauya kunge mutorwa munyika ino uye zvino ndonzwa senge chikamu chayo. Zvakandipa mhuri yangu uye ndangariro dzinoshamisika yekukoshesa uye nekugamuchira kudiwa uye kutsigirwa kusinga peri kuyerwa. Rakandiita kuti ndivheneke munzira zhinji uye rakandipa tariro mumazuva angu erima. Mutungamiriri wenyika ino munhu anoyemura Anesimba-anoda, akazvipira, anorangwa asi achizvininipisa uye ane hanya. Iyo nhungamiro yake uye chiratidzo chakagadzira Dubai nyika kuva Wonderland. Iye munhu wokutevedzera, mumwe munhu, wandinotarisa kwaari.
Kugamuchira vaeni zvakanaka, kudziya uye kupa muenzi mumwe nemumwe chishamiso ruzivo ndiyo vimbiso yeDubai. Uyezve, mushanyi anoshanyira pano aine mibvunzo uye confusions ane chokwadi chekudzoka aine kunyemwerera kukuru pazviso zvavo. Rega ndikuite kuti unzwe Dubai uye ngatitangei nekutanga.
Iwo anopenya machena kunze kweBurj Al Arab anotora fomu husiku. Sezvo mafungidziro uye magetsi ekuratidzira anooneswa pane ayo chimiro mune mesmerizing kutamba. Chikwereti: Burj Al Arab Facebook.
Burj Al Arab-The Iconic Hotel iri munzira yeJumeirah yakatarisana neArabian Gulf. Emirates inzvimbo yekudzikisira uye bvarura kubva mukushushikana uye kunetseka. Zvakare yenyika iyo yakasarudzika uye ambience yehotera inoita kuti iwe ude nerudo neakasarudzika sevhisi uye ambience iyo inopa muenzi. Jumeirah Madinat Jumeirah- Kana iwe uchinge uchishuvira kuti unzwe seMuchinda kana Princess paisazove neimwe nzvimbo kana pamwe ndinofanira kuchidana saimba yamambo.
Iyo yeRoyalty uye kuseta kwehotera kwakadaro muenzi uyo anoshanyira ino nzvimbo ane chokwadi chekunzwa hukama. Kana ndikafanira kunyora pasi mahotera ese akasarudzika uye nditaure nezvazvo zvinogona kunge zvakawanda asi hongu ndaizotumidza mazita mashoma izvo zvinoita kuti ini nemuenzi wangu tinzwe zvakasiyana uye zvakare kupiwa kunzwisisika kwakakwana nguva imwe neimwe Ndakavashanyira Jumeirah Zabeel Saray, Atlantis the Palm, Fairmont Dubai, Armani iri muBurj Khalifa nezvimwewo.
Vashanyi vane akakura kuravira mabheji vanogona kunakidzwa ese akasiyana-siyana chikafu chegungwa, chiArabic grill, yummy zvekuItaly chikafu, Iyo muIndiya Delicacy chats, kurova kwemaappetizer uye zvinonakidza zvikafu zvakashandiswa mumaresitorendi akasiyana akatenderedza Dubai. Mueni anogona kudya kusvikira aguta uye anofarira chikafu chisvinu kusimbisa dumbu ravo rinobaya.
Dubai, United Arab Emirates Huru!
Ini pachedu ndine akawanda maresitorendi andinofarira asi kudoma mashoma ayo akaisa chisingakanganwike pamwoyo wangu ndiParkchic iri paPari yakatarisana negungwa rakanaka rinoita kuti iwe unakirwe nechikafu chako apo mhepo inotonhorera inopomha bvudzi rako, Amla Restaurant iri muJumeirah Zabeel Saray inopa chaiyo kunzwa kweIndia tsika uye kuravira kweIndia, Al Mahara Seafood Restaurant - Inowanikwa muBurj Al Arab iwe unogona kunakidzwa nekunakidzwa uchiona kunaka kwezvisikwa zvegungwa.
Kune akawanda akanaka nzvimbo achiri kuongorora asi yeresitorendi yega yega ine masaini masaisai ayo, mamiriro WOW chiitiko uye inowedzera munzira yavo yekurangarira.
Dubai Spa uye nzvimbo dzekugara zvakanaka
Ivo vanotenda mune hutano kurarama uye rudo kuteedzera chimiro chavo chemukati kunogona kupukunyuka nyore nyore kune akasiyana maSara. Uyezve, kugara zvakanaka nzvimbo dziri mu Dubai Tichadana vashoma The Moksha Spa, Talise Spa, zvakare, iyo Armani Spa etc. Nezve sarudzo dzekurapa dzinokosha dziripo inopihwa kumuenzi maererano nemafungiro avo. Mushure mekurapwa kwavo zvirokwazvo muenzi anonzwa achifarikana uye mweya yavo ichizvipira pachavo kune kwerunyararo kunzwa mukati.
Vanhukadzi nevanasikana vakapindwa muropa nekutenga havafi vakagutsikana sezvavanokwanisa kuwana zvese zvavanoshuvira papasi pano muDubai. Semuenzaniso, hembe dzakatsemurwa, zvishongedzo zvinoshamisa, dhiziri remumba, chikafu chine hutano, zvikafu zvemukati zveGadheni decors. Gentlemen une chokwadi chekubatanidzwa nemagetsi akasiyana siyana anowanikwa mumashopu anonakidza uye motokari showrooms ane akanakisa mitambo motokari zvirokwazvo ndichavatisa.
Zvinhu zvokuita muDhaibha nevana
Kids & Mueni anoda kufarira, kushambadza uye kuona Dubai vane zvakawanda zvinokwezva kushanyira uye gadziriswa nenzvimbo dzakaita seDubai theme paki, Desert Safari, Dubai Creek, Dubai Museum uye Jumeirah Mosque, Iyo Glow Garden uye zvimwe zvakawanda zvekuenda.
Vana vanouya pano vane chokwadi chekuva nekunzwa kwavo kwave kuve muAlice mu Wondland uye ichavhundutswa pamwe nehuwandu hwekushanya inowanikwa munzvimbo dzinoverengeka seguta rinonakidza, Iyo Dolphin Aquarium, Kidzenia, Iyo Magirazi Planet, Legoland, Iyo IMG World, Aqua vene mapopoma emvura, Wild Wadi Water parks ichaita kuti varambe vakabatikana uye vashamiswa sezvavanoshanyira nzvimbo dzakasiyana dzavaita kuti vanzwe kugara ipapo zvachose.
Dubai ndeyevaya vose vakauya kuzotsvaka mikana yemabasa!
Dubai yakavewo iyo inofarira huwandu hwemabhizimisi kune vakawanda uye kudzidzisa pasi, mutungamiri uye mutungamiri kune avo vose vakauya kuzotsvaga mikana yemabasa. Kune nyaya dzakawanda dzehukutu kune hupfumi, zero kune gamba uyo vakawana kubudirira kwavo uye vakawana kurota kwavo chinangwa munyika ino.
Manera acho akatambanudzwa kune vatsva nevatsvaki vekutsvaga yakadzika midzi nekudzamisa kuziva kwavo uye nekuipukuta kuti ivheneke senyeredzi.
Kupedzisira asi zvisiri zvishoma zvese zvandinazvo kutaura ndeDubai inzvimbo yemashiripiti ine runako rwayo, tsika nezviitiko zvinodarika fancies. Dubai inobudirira uye inoramba ichikura mune zvese zvikamu saka yega yega Anodzokorora Muenzi paanoshanya zvakare ane chimwe chinhu zvakasiyana kuti uone. Dubai inzvimbo yekugadzira isingakanganwike ndangariro mune imwe neimwe nguva yakashandiswa pano. Ida Dubai & Inzwa Dubai. Rega ndipedzise neiri nhetembo.
Zvemudiwa wangu Dubai, Poem
Pane nzvimbo munyika muno
Izvo zvinonzi "Dubai" Nyika inotota
Kuedza, Kunakidza, kunze kwekufungidzira
Ndinokutengesa iwe ndiyo nyika yakasikwa yakasikwa
Vana, Mhuri, Vakaro nevakuru pano
Munhu wose anogona kugamuchira vaeni uye kutarisira
Dubai nguva dzose inoedza kuunza kurota uye mafungiro aripo.
Zviri nyore, Serene uye Mukuru
Runako uye chikomborero zvicharumbidzwa nokusingaperi pamusoro penyika ino.
Dubai City Company, kazhinji kutaura, ikozvino kupa yakanaka mabasa mikana. Zvakare, isu tiri kupa guides nokuti Basa muDubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Dubai expats. Saka, uine izvi mupfungwa, ikozvino unogona kuwana vatungamiriri, matipi uye basa muUnited Arab Emirates nemutauro wako.